sitrana Outlook Express Data avy amin'ny Temporary fisie
Home Products DataNumen Outlook Express Repair sitrana Outlook Express Data avy amin'ny Temporary fisie
Rehefa Outlook Express mametaka rakitra .dbx, hamorona tempo izy iorary .dbt fisie eo ambanin'ny fampirimana mitovy amin'ilay rakitra .dbx. Ohatra, raha rakitra Inbox.dbx ianao dia mifehy, avy eo ny temporary rakitra dia ho Inbox.dbt.
Rehefa misy ny lesoka mandritra ny fandidiana voafintina ary tsy afaka miditra amin'ny fampirimana mailaka intsony ianao, ary tsy afaka mamerina angon-drakitra tadiavina avy amin'ilay rakitra .dbx, dia mbola azo atao ny mamerina ny angon-drakitrao avy amin'ny temporary .dbt fisie, toy izao:
Tadiavo ny fampirimana izay itahirizana ilay rakitra .dbx.
Zahao raha misy temporary .dbt fisie eo ambanin'io fampirimana io ihany.
Raha eny, dia omeo anarana rakitra hafa miaraka amin'ny extension file .dbx, ohatra, raha antsoina hoe Inbox.dbt ilay rakitra .dbt, dia azonao atao ny mamerina ny anarana hoe InboxTemp.dbx.
Use DataNumen Outlook Express Repair hizaha ny fisie InboxTemp.dbx ary hamerina azy ireo ny mailaka.